Antenimieram-pirenena : Nitondra ny feon’ ny vahoaka ireo depiote -
AccueilRaharaham-pirenenaAntenimieram-pirenena : Nitondra ny feon’ ny vahoaka ireo depiote
Nankatoavina teny amin’ny antenimieram-pirenena avokoa ireo volavolan-dalàna miisa 3 hifehy ny ny fifidianana ankapobeny sy ny fitsapankevi-bahoaka, mifehy ny fifidianana Filoham-pirenena, mifehy ny fifidianana Solombavambahoaka. Miisa 79 ireo solombavambahoaka no nandany izany omaly. Amin’ ny maha lalàna fehizoro azy moa dia ilaina solombavambahoaka miisa 76 no mandany azy, izay raha ny hita dia nihoatra io fetr’isa ilaina io. Raha ny fandehan’ ny fandaniana ireo lalàna teny amin’ ny Antenimieram-pirenena kosa dia nolaniana isaka ny andininy ireo lalàna telo ireo, ary zara raha nisy ny fanitsiana. Noho izany dia saika notsipahan’ ireo solombavambahoaka avokoa izany ireo fanitsiana izay nentin’ ny teo anivon’ny asam-baomiera, raha ny lalàn’ny fifidianana ankapobeny sy ny fitsapankevi-bahoaka no resahina . Raha ny fanitsiana izay natao tamin’ io lalàna io dia miisa 12 izany, izay kipitsopitsony ara-panoratra avokoa izany. Mikasika ireo lalàna izay nofafan’ ny kaomisionina kosa indray izay miisa 37, izay mikasika ny famatsiana ny fampilezan-kevitra dia efa niverina avokoa.
Mikasika ny volavolan-dalàna fehizoro mifehy ny fifidianana filoham-pirenena kosa dia tsy nisy ny fanitsiana, ary notazonina kosa ny fampiasana ny bileta samy manana ny azy amin’ ny fihodinana faharoa. Fa ankoatra izay kosa dia notazonin’ ireo solombavambahoaka avokoa ny mikasika ireo andininy izay naha be resaka teto amin’ ny firenena tahaka ny hoe fitazonana hatrany ny fitakiana ny bileta laharana faharoa, satria izay ihany hoy izy ireo no ahafahana mamantatra fa olona madio. Ankoatra izay dia nolanian’ireo solombavam-bahoaka tsy nasiam-panitsiana ihany koa ny mikasika ny andininy momba ny hetra. Izany hoe ny kandida izay hirotsaka amin’ny fifidianana filoham-pirenena dia tokony mahavita ny adidiny amin’ny fandoavan-ketra, ary io antontan- taratasy io dia takiana ihany koa ho an’ireo izay milatsaka hofidiana.
Mikasika kosa indray ny volavolan-dalàna izay hifehy ny fifidianana solombavam-bahoaka kosa dia tsy nitovy tamin’ ireo lalàna roa ireo, satria dia nisy ny fanitsiana miisa roa izay notanterahin’ ireo solombavambahoaka, dia ny mikasika ny fanohanana sy ny fanoloran’ireo olomboafidy ho an’izay kandida tsy anaty antoko , ary eo koa ny mikasika ny bileta laharana faharoa. Voalaza anatin’ ity lalàna izay hifehy ny fifidianana solombavambahoaka ity ilaina ny fanoloran’ ny olomboafidy miisa 10 izany hoe ben’ny tanàna, na mpanolotsain’ny tanàna ao amin’ ny toerana izay hirotsahany, ho an’ izay kandida tsy miankina. Ho an’ ireo solombavambahoaka kosa dia lasa mampanjaka ny kolikoly izany ka antony nisian’ ny fanitsiana. Ankilany mikasika ny bileta laharana faharoa kosa dia nambaran’ ireo solombavambahoaka fa sarotra kokoa no maka io bileta laharana faharoa io, fa mba ahafahana mahazo ny antontan-taratasy ilaina amin’ny firotsahana dia ny bileta laharana fahatelo dia efa ampy.
Nanakorontana indray ny Mapar
Alohan’ ny handaniana ny lalàna izay hifehy ny fifidianana, dia efa nisy ny fanomanana ny korontana izay nentin’ ireo solombavambahoaka avy amin’ ny Tiako i Madagasikara sy ny Mapar, satria dia noampangain’izy ireo fa nisy ny kolikoly sy vola izay nomena ireo solombavambahoaka sasany. Ny nahagaga aza dia efa nisy mihitsy ny sora-baventy nentin’izy ireo teny amin’ ny lapam-panjakana teny Tsimbazaza, ary ireo solombavambahoaka izay miteny kosa ka tsy mitovy hevitra amin’ ireo ary mandray fitenenana dia asian’izy ireo io soratra io aoriany. Tsy izay ihany fa nifampitadiavana hatramin’ ny micro aza teny amin’ny antenimieram-pirenena, hany ka voatery ny filohan’ity andrim-panjakana ity niantso ny mpitandro filaminana. Ilay mpiasan’ny antenimieram- pirenena izay naka ilay micro kosa moa dia voakaikitra mihitsy no niafarany. Korontana niniana novolena ny zava-nisy omaly, ary dia tsy mendrika ny lapam-panjakana .
Milavonjy Philobert (VPM MMM)
Manoloana ny filazana fa nisy ny kolikoly noho ny fivoriana teny amin’ ny Paon d’or, dia mazava ny natao teny fa fivoriana nentina nandinihana ny fomba handaniana ny lalàna izay ilain’ ny firenena. « Io fivoriana io anefa ve rehefa izay no manao izany dia hoe kolikoly no atao, ireo izay tsy mahita ny fivoriana notanterahina kosa no manely tsaho fa hoe kolikoly no notanterahina” hoy hatrany i Milavonjy Philobert. Noho izany ny filaza ampahibe-maso izay notontosain’ ity solombavambahoaka ity nandritra ny fandraisam-pitenenana dia tsy resa-bola velively fa kosa fihetsika izay efa fanao amin’ny fandinihana ny lalàna izay holaniana.
Nicolas Randrianasolo (MAPAR II)
Tsy mendrika ny fihetsika izay nasehon’ireo solombavambahoaka sasany ny maraina alohan’ny handinihana ny lalàna, lapan’ny demokrasia ny ety Tsimbazaza ka tsy tokony hambolena korontana tahaka ireny. Izao dia lasa very hasina ny antenimieram-pirenena, ka henatra eo imason’ireo vahoaka malagasy ny zava-mitranga.
Ratefiarivony Jaona (AND)
Mazava fa tsy misy intsony ny tsimatimanota amin’ izao fahalanian’ny lalàna mikasika ny fifidianana miisa telo izao, mazava satria dia ho hita taratra amin’ izay ireo izay nanao ny tsy mety teto amin’ ny tany sy ny firenena manoloana ny fitakiana ny bileta laharana faharoa. Ankehitriny tokoa mantsy dia ilaina olona madio ny firotsahana hofidiana, ary izay mahafeno ny fepetra amin’ny fahadiovana izay dia afaka mirotsaka avokoa, tapitra hatreo izany ny atao hoe tsimatimanota
Manamarina etoana izahay fa tsy marina ny fanambaran’ireo depiote sasany fa nolaniana amin’ny ankapobeny ireo volavolan-dalàna mahakasika ny fifidianana ireo. Nisy andininy miisa 44 tao nasiam-panovàna ary nekenay izany. Nodinihina sy nohalalinina tsara izany rehetra izany. Mampalahelo fotsiny ny fikasan’ny sasany amin’ny tsy tokony hampandehanana iny fivoriana iny. Tsy mendrika ny ho solombavambahoaka mihitsy ny olona manana toe-tsaina tia fanakorontanana.